'निष्ठुरीलाई माया गरी' गीत राजेशपायलको होइन, मेरो हो : मुरलीधर [भिडियो अन्तर्वार्ता]
काठमाडौं- एउटा राम्रो अभिनेता मात्र होइनन्, राम्रा गायक पनि हुन्- मुरलीधर । 'उडायो सपना सबै हुरीले...' यो गीत नसुन्ने र नगुनगुनाउने सायदै कोही नेपाली होलान् । बलिउडमा समेत स्थापित यो गीत गायक, कलाकार मुरलीधर मिजारले गाएका हुन् ।
सिराहाको सामान्य परिवारमा जन्मिएका मुरलीधरले आफ्ना पिताबाट संगीतको कखरा सिके र मुम्बईबाट संगीतमा बी. म्युजिक गरे । लगभग उदित नारायण र डेनी डेङजोङपा सँगैका मुरलीधर बलिउडको दौडमा उनीहरूजति कुद्न नसकेपनि आफ्नो छुट्टै परिचय भएका कलाकार हुन् ।
थुप्रै नेपाली र हिन्दी चलचित्रमा अभिनय गरेर तथा आफ्नो स्वरबाट पनि परिचित गायक मुरलीधरको 'उडायो सपना सबै हुरीले', 'निष्ठुरीलाई माया गरी आफैलाई रोगी बनाएँ', 'चिसो चिसो सिरेटोमा', 'तिम्रो आँखाको भाका' जस्ता थुप्रै चर्चित गीतहरू छन् । उनले लगभग डेढ सय जति नेपाली गीत गाएका छन् भने हिन्दी, मैथिली र भोजपुरी गीतहरू पनि थुप्रै गाएका छन् ।
उनको पनि अभिनय रहेको 'हम आजाद है', र 'मिस्टर इन्डिया' चर्चित फिल्म हो । यस्तै नेपाली चलचित्रमा साइनो, कन्यादान, पिरती, सम्झनालगायत पछिल्लो समय निखिल उप्रेतीको भैरवमा पनि अभिनय गरेका छन् । भोजपुरी र मैथिली फिल्म बनाएका पनि छन् उनले ।
लोकान्तर संवादको लागि दिल निशानी मगरसँग भएको कुराकानीमा गायक मुरलीधरले 'निष्ठुरीलाई माया गरी' भन्ने गीत राजेशपायल राईको नभई आफ्नो गीत भएको बताएका छन् । तर आफ्नो नामको त्यो गीत रेडियो नेपालले लुकाएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
राजेशपायल राईले 'दाई गल्ती भयो' भन्दै माफी मागेको पनि उनले बताए । मञ्चमा गाउँछु भनेर मागेको गीत राईले रेकर्ड गरेको मुरलीधरको आरोप छ ।
नेपाली शास्त्रीय संगीतमा बेग्लै योगदान दिएका मुरलीधरसँगको संवाद :
‘कता गयौ गीत गाउने गाइने दाइ ? दुःखपीर विरहमा च...
सामसङले सञ्चालन गरेको ‘ब्ल्याक पिंक डान्स फेस्टिभल’क...
निर्मल निर्देशित 'नरोक मलाई' गीतको भिडियो सार्वजनि...
ग्रेमी अवार्डको मनोनयनमा परेकी आरियानामाथि लिरिक्स चोरीको आरोप
शुक्लाफाँटा खुल्ला चिडियाखानाका रुपमा विकास गरिन्छ : मन्त्री बस्नेत
साढे ६ करोडमा मुग्लिङ प्रहरीको भवन बन्दै, आईजीपी खनालले गरे शिलान्यास
मौसममा सुधार, यस्तो छ तीन दिनको प्रक्षेपण